> Resource > Ladnaansho > Top 5 Photo Recovery Software for Windows iyo Mac
Photos qaban xasuus fiican ee ay dhacdo gaar ah, qof gaar ah ama goob. Waxay qaban qiimaha badan taas oo macnaheedu yahay in ay khasaaro turjumi karaan si ay u dhamaystiraan tirtiro oo ka mid ah xusuus qabtay. Waxaa jira siyaabo badan si kastaba ha ahaatee si loo hubiyo in uu qasab kuma aha in ay ka dhacaan.
Marka photos yihiin baxshay qaybta kale oo ka baxsan buugga sawirka fursadaha barnaamijka waa in files waxaa lagu lumin karaa. Xaaladda kala duwan la PicaJet Photo Recovery taas oo ah mid ka mid ah
• The software fiican in la isticmaalo si loo soo kabashada sawir ka computer ama qalab kale sida kasta waxaa taageera software this.
• Waxa uu feature ah soo kabashada sawir isku dhafan waa in taas oo ka dhigaysa ah hanaanka soo kabashada file fudud oo dagdag ah.
• Waxaa kabanayso photos tirtiray aad si deg deg ah.
• Mararka qaarkood waxay qaadataa wakhti badan ku soo kabsaday images tirtiray
Qaadato PicaJet Photo Recovery
Recovery Image Smart
Waxa uu fududeeyaa geeddi-socodka image iyo sawir dib u soo celinta ee JPG tirtiray, GIF iyo sanamyadii PNG. Nooc kale ee software lagu kalsoonaan karo oo loo isticmaali karo inuu ka soo kabsado photos lumay waa Recovery Image Smart.
• Waxay leedahay muuqaal gaar ah oo kuu ogolaanaya in aad joojiso raadinta xogta iyo hanaanka soo kabashada marka aad ogaato faylka aad raadineysay.
• software photorecovery Tani waa aan ku xaddidnayn soo kabashada ee qaabab file JPG oo keliya, laakiin dadka kale sida GIF iyo PNG sidoo.
• Xitaa naqshadeynta aad jeceshahay in lagu soo kabsaday karaa drive ay horey u formatted. Waa doorasho wanaagsan tan iyo waa la jaan qaada Vista, OS Windows XP iyo kuwo kale.
• welwelsan qaar ka mid ah sawirada lumay? Mar dambena ma welwelin ha this software si sahlan loo isticmaali sida aad sugto shuqulka aad u.
• Waa sahlan oo fudud in la isticmaalo
• Waa awoodaan inay ka bogsadaan sanamyadii ayaa la tirtiray oo aan dib u dhac.
• Waa dabacsan
• Waxa kaliya taageeraa waxaa qaabab GIF / PNG, jpeg / JPG
• ma loo isticmaali karaa qalabka la dhaqaajin karo.
Hel Recovery Image Smart
Kabashada sawir xiddig
Kaxaynta Systems: Windows, Mac, Linux
Waxaa dib u soo celineysa wax tirtiray music, videos iyo sawiro ama nooc kasta oo kale oo file multimedia. Kabashada sawir xiddig waa xaq choicewhether waa ka camera adigital, laptop, kaararka xusuusta ama sare miiska aad tirin karaa on this sawir free kabashada software in aanay si aad ku kici.
• Waxay u baahan tahay farsamo ma aqoon, waayo-aragnimo ah ama taageero wax kasta oo ay u isticmaalaan . Waxay leedahay tilmaamo cad oo loogu talogalay qof kasta oo isticmaalaya Windows OS.
• Waxay si fiican u soo celin kartaa dhammaan photos iyo faylasha kale multimedia ka jira qaabab file kala duwan. Jpeg iyo TIFF yihiin qaar ka mid ah qaab sawir files in aad soo celin karaa iyadoo la isticmaalayo software this.
• Waxay ka kooban qalab kala duwan oo soo kabashada kale sida wixii taageertaa dib u soo kabashada ee video files ay ka mid yihiin Encoded Movie File, VOB, OGG ciyaaryahan Media iyo qaar badan.
• Waxa kale oo aad noqon kartaa runta ah oo dib u soo celinta xog audio aad qaababkan soo socda; MP3, M4P, regelingen iyo RPS oo kaliya in la xuso dhowr ah.
• magac camera Popular sida Kodak, Fuji, Canon, Nikon iyo Olympus waxaa taageera software this. Taas macnaheedu waxa weeye in ay soo celin karaa oo dhan photos, sawirada iyo noocyada kale ee xogta lagu kaydiyaa mid ka mid ah qalabka.
• Waxaa soo kaban karto oo dhan images si fudud sababtoo ah waxa uu boggan fursadaha.
• Ma noqon kartaa awoodaan inay ka bogsadaan oo dhan files tirtiray iyo sanamyadii.
• Waa qaali
Hel xiddig Photo Recovery
Software Tani soo celin tirtiri karaa, kharribeen iyo formatted sawiro ka drives disk adag, kaamirooyinka digital iyo telefoonada gacanta. Kabashada sawir Asoftech sidoo kale waa doorasho wanaagsan haddii aad raadinayso faa'iidooyinka ku tiirsan xiddig Photo Recovery qalab
• Waxa ay gargaar u leh soo kabashada ee images si qalad ah tirtiray iyo files audio. Liiska qaabab file oo ay taageerayaan software waa muddo dheer.
• Tani waxaa ka mid ah software ka yar celin karaa sawiro lumay ka shiidaa telefoonada oo dhan, kaamirooyinka digital iyo sidoo kale qalab kale oo lagu kaydiyo dibadda ay ka mid yihiin kaararka xusuusta, PDA, Zip disk, drive adag ka tago iyo qaar badan oo.
• The Feature xardho Advanced si fiican u shaqaynayaan la sawiro tan iyo markii ay ka dhigi kartaa cad oo sanamyada qayb cirro in haddii aan wax danbi laga yaabaa in aanay waxtar leh oo dhan, xataa ka dib markii ay soo kabashada.
• Faa'iidooyinka la isticmaalayo qalab Asoftech kabashada sawir tiro badan yihiin iyo tani waa mid ka mid ah sababaha ay dadku u isticmaalaan maadaama ay tahay software lagu kalsoonaan karo soo kabashada sawirka.
• Waxaad maalmahan nasan karaa inta warbixinta xogta laga badiyay gaar ahaan jiritaanka software kabashada image.
• Waa fududahay in la isticmaalo.
• Waxay leedahay interface cad
Hel Asoftech Photo Recovery
Wondershare Photo Recovery yimaado la waxtaro dheeraad ah soo kabashada image iyo soo kabashada sawir sidoo.
• Waxay leedahay muuqaal gaar ah oo awood u user inuu ka soo kabsado sanam la marsiiyey adigoo mar kale maraan habka la mid ah.
• Xaaladaha intooda badan ma files kasta baxey noqon doonaa muhiimadda ay leedahay in aad si ula software kabashada sawir aad si raaxo leh ku eegaan karo files ah si aad u soo qaado oo kaliya waxa muhiim ah.
• Waxaa jira hab ee software-kabashada sawir oo lacag la'aan ah in lagala soo bixi karaa Internetka. Marka aad hesho software kabashada sawirka lacag la'aan ah oo aad ka hor tago oo la bilaabo nidaamka tirtiray sawir kabashada.
• Dooro sawirka gaarka ah si ay u soo kaban
• Ladnaansho photos, audio iyo videos
• lagu kalsoon yahay ay u isticmaalaan.
• sow ma taageeri Qaabka FLV.
Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Nikon D7000 DSLR
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray AVI Videos ama Movies